१० प्रकारका आमा – MySansar
१० प्रकारका आमा
Posted on April 18, 2015 by mysansar
आज आमाको मुख हेर्ने दिन। अङ्ग्रेजी भाषा नै चलाउन रुचाउनेहरुले आजको दिनलाई मदर्स डे पनि भन्ने गर्छन्। फेसबुक र ट्विटरतिर आज आमा, मम्मी, ममको फोटो राख्नेे लहर चलेको छ। साथीकी आमा चिन्नुहुन्न? आज सोसल मिडिया छिरिहाल्नुस्।
जन्म दिने आमाको तुलना कसैसँग हुन सक्दैन। यो आदर्श वाक्यलाई आदर्शमा मात्रै सीमित गरेर आमाहरुलाई हुर्केका छोराहरुले गर्ने हेला हाम्रो नजरबाट लुकेको छैन। के हो यसको कारण ? कारण जिन्दगीमा अरु आमाहरु पनि हुन्छन्। तीमध्ये कसैलाई बढी महत्व दिँदा जन्म दिने आमा छायाँमा पर्न गएका हुन्छन्। १० किसिमका आमा यस्ता छन्-
जसलाई आफ्नो जन्म दिने आमाले भन्छिन्- ‘कुनचाहिँ तेरी आमासँग रात-रात भर फोनमा कुरा गरेर बस्छस् हँ….?’
बाँकी कुरा आफै बुझ्नुस् 😛
(पहिलो पटक April 29th, 2014 मा प्रकाशित)
7 thoughts on “१० प्रकारका आमा”
R.J Budhathoki, USA says:
दशौ आमा चाँही भुन्टे कि आमा !
अनि धाई आमा खै त… आमा बराबर नै हुन् उनि पनि
काकी आमा चै छुट्नु भएको जस्तो छ
मितिनी आमा अर्थात् आमा कि मितिनी अनि मित्र आमा साथी को आमा
dawn prince says:
झन् मेन आमा छुटे छ नी! खै त समाबेस गरेको “नेपाल आमा “
B.P. bhattarai says:
खुशी लाग्यो आज फेसबुक खोल्ने बित्तिकै सबैका वालमा आफ्ना ममता मई आमाहरुको
फोटो देख्न पाइयो र मैले पनि राखौ कि भनेर फोटो छान्न सुरु गरे तर फेरी मन बदलियो वालमा सजिएका प्राय जसो आमाको फेसबुक त छैन तर पनि उनीहरुले गरेको माया हाम्रो भन्दा कति हो गुना बडी छ त्यसैले आजलाई आमाको फोटो फेसबुकको वालमा भन्दा हृदयमै राख्ने विचार आयो,,,,,,,,,, ” जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी!”
अर्को एउटी आमालाई बिर्सनु भएछ, आधुनिक जमानाकी आमा अर्थात भाडाकी आमा surrogacy mother